Izincwadi eziyi-10 ezihamba phambili nguGabriel García Márquez | Izincwadi Zamanje
Izincwadi eziyi-10 ezihamba phambili zikaGabriel García Márquez
U-Alberto Legs | | Abalobi, Amabhuku, Literatura
Yize sekuphele iminyaka engaphezu kwemithathu adlula emhlabeni, umhlaba awukamkhohlwa uGabo ... futhi akasoze. Ekuqaleni kwakusuka e-Aracataca, eColombia, idolobha elazifihla ngaphansi kokuduma kwabangaziwa Macondo kusukela eMinyakeni Eyikhulu Eyodwa Yokuhlala WedwaUGabriel García Márquez (Mashi 6, 1927) usevele ungumbhali omkhulu kunabo bonke owakhiqizwa yizincwadi zaseSpain American. Lezi Izincwadi eziyi-10 ezihamba phambili zamahhala zikaGabriel García Márquez qinisekisa umlingo womsebenzi we ubaba weqiniso lemilingo kanye nomnqobi weNobeLowo owasikhohlisa ngamandla akhe okuchaza izwekazi encwadini, uhlanganise iqiniso neqiniso futhi aguqule ezinye zezindaba zalo zingaphelelwa yisikhathi.
1 Iminyaka eyikhulu yedwa
2 Uthando ngezikhathi zekholera
3 Umlando Wokufa Okubikezelwe
4 UColonel akanamuntu ongambhalela
6 Indaba yokulahlwa
7 Ekwindla Komphathi
8 Izinkumbulo zezifebe zami ezidabukisayo
9 Amashumi amabili nambili amaPilgrim Tales
10 Phila ukutshela
Iminyaka eyikhulu yedwa
Ekhulelwe nguGabo kwesinye sezikhathi zakhe zomnotho ezimbi kakhulu, umbhali wayengakwazi ukubona ukuthi umsebenzi wakhe, ngemuva kokuthunyelwa kumshicileli wase-Argentina uSudamericana ngo-1967, uzoba yimpumelelo engenakuphikiswa. Indaba yomndeni wakwaBuendía, ohlala edolobheni elilahlekile laseMacondo, akagcinanga nje ngokulandisa umlando weLatin America ngezizukulwane ezimbalwa, kepha futhi nokuqamba ukuqina kobuqiniso bemilingo obabukhona phakathi kweminyaka yama-60s kanye nama-70s ukuze kube uphawu olugqamile lwezincwadi ze-Ibero-American . Ezincwadini eziyishumi ezihamba phambili zikaGabriel García Márquez lona umsebenzi wakhe omkhulu, ngaphandle kokungabaza.
Uthando ngezikhathi zekholera
Uthando ngezikhathi ...
Izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, uGabo wakuvuma lokho Uthando ngesikhathi sekholera kwakuyinoveli yakhe ayithandayo. Esinye sezizathu silele endabeni yabazali bomlobi uqobo njengomthombo wokhuthazo kwezothando lukaFermina Daza, oshade nodokotela uJuvenal Urbino, noFlorentino Ariza onesizungu edolobheni eliyitheku eCaribbean yaseColombia. Kuthuthukiswe kuyo yonke impilo yabaphikisi abathathu, Uthando Ezikhathini zeCholero lufana ne-bolero ehamba kancane, ekucwilisa emicabangweni yabalingiswa isikhathi okuwukuphela kwaso ithemba. Ishicilelwe ngo-1985, le noveli ibe yimpumelelo futhi (un) ibifanelwe ukulungiswa kwefilimu okwenziwa ngo-2007.
Umlando Wokufa Okubikezelwe
Umlando wokufa ...
Kusukela ekhasini lokuqala usuvele usazi isiphetho, kepha ingwegwe ukwazi ukuthi izingcezu zephazili ezaholela ekufeni kukaSantiago Nasar zihlangana kanjani, zimangalelwa ngu-Ángela Vicario, osanda kushada nodokotela uBayardo San Román, ngokuba imbangela yokulahleka kobuntombi bakhe. Indaba yobugebengu wonke umuntu ayazi kodwa akekho noyedwa owaba nesibindi sokumisa isondele kunoveli yabaseshi futhi ithola amathonya ahlukahlukene kuGabo wezintatheli. Ishicilelwe ngo-1981, Chronicle of a Death Foretold Kuphefumulelwe icala langempela lomuntu obulewe edolobheni laseColombia ngo-1951.
UColonel akanamuntu ongambhalela
UColonel akanamuntu ...
Umsebenzi wesibili oshicilelwe kaGarcía Márquez kwakuyile noveli emfushane, naphezu kobude bayo, eyayinendaba ebucayi njengoba yayicashile. I-protagonist, uColonel oya ethekwini njalo ekuseni elinde impesheni yakhe ngezinsizakalo zakhe eMpini Yezinkulungwane Zeminyaka, uhamba emigwaqweni yedolobha laseColombia, asebenzisane nonkosikazi wakhe futhi azame ukondla iqhude lakhe elishonile. phakathi kobuphofu obukhulayo. Le noveli yashicilelwa ngo-1961 futhi UGabo wayithatha "njengencwadi yakhe enhle kakhulu".
Inoveli yokuqala eyashicilelwa nguGabo isivele yanikeza izinkomba zabalingiswa, izimo nedolobha laseMacondo elizokwaziwa ngemuva kokushicilelwa kwe-One Hundred Years of Solitude. Inoveli emfushane ehlanganisa imibono emithathu yomndeni (lokho kukababa oyisikhulu, indodakazi yakhe nomzukulu wakhe) maqondana nokungcwatshwa kwendoda ezondwa ngabantu bonke. Kulo msebenzi, uGabo usevele ubonakalisa ukweqa kwakhe kwesikhathi kanye nezinye izici zokwenza imilingo ukukwenza kube isingeniso esihle kulo lonke uhla lwezincwadi zakhe.
Indaba yokulahlwa ...
Umsebenzi wombhali wobuntatheli weza ngemuva kwezinyanga eziningi zophenyo ngomcimbi othakazelisayo owashaqisa yonke iColombia. ULuis Alejandro Velasco Wasuka eMobile, Alabama (United States), ngomkhumbi iCaldas, owawonakele, wamphoqa ukuba achithe izinsuku eziyishumi olwandle ngaphandle kokudla nangesihe sezibalo zabaphosayo mayelana nokuthi izindiza zokutakula zizofika nini. Indaba yaveza ukuhweba okushushumbisa phakathi kwala mazwe womabili, elahla ukungakhohlwa iqhawe laseColombia indaba yalo eyaphendulwa inoveli nguGabo ngo-1970.
I-Autumn of the Patriarch ...
Isibalo somashiqela eLatin America kube yisethenjwa semibhalo esivuswe njengabanye abambalwa nguGabo kule ncwadi. Ithathwe njengenoveli yephrozi, lapho amazwi amaningi kumuntu wokuqala ahlangana njengemibono yomphathi wobushiqela, le noveli yashicilelwa ngo-1975 futhi ngokusobala yayingamthandi kakhulu uFidel Castro, umngani omkhulu kaGabo.
Izinkumbulo zezifebe zami ezidabukisayo
Inkumbulo yezifebe zami ...
Inoveli yokugcina kaGabriel García Márquez, eyanyatheliswa ngo-2004, kubangele impikiswano ethile ngemuva komzuzu wokukhishwa kwayo inikezwe icebo eyaliveza: indaba yothando phakathi kwentatheli esikhulile ethatha isinqumo sokuzinikela njengesipho sokuzalwa sama-90 ubusuku obubodwa bentshisekelo nentsha esebenza kahle ethatha isinqumo sokuthengisa ubuntombi bayo ukusindisa umndeni wayo. Ukuxhashazwa kwamandla, isizungu nokufa, izingqikimba ezintathu eziyizintandokazi zikaGabo, zihlangana kule ndaba ebekwe edolobheni laseBarranquilla maphakathi nekhulu lamashumi amabili futhi ifilimu yakhe eyabona ukukhanya ngo-2012.
Amashumi amabili nambili amaPilgrim Tales
Izinganekwane eziyishumi nambili zamaPilgrim ...
UGabo wayengumbhali wamanoveli omkhulu kepha, ngaphezu kwakho konke, umbhali wezindaba ezimfushane, uhlobo lwababhali abaningi beqiniso lemilingo laseLatin America. Futhi esinye sezibonelo ezinhle kakhulu lokhu kuhlanganiswa kwezindaba eziyishumi nambili ezikhuluma ngazo izindaba zezinhlamvu ezihlukile zaseLatin American endaweni yaseYurophu: kusuka kumongameli wakudala othunjiwe kuya kuhulumeni waseJalimane onakekela izingane zombhangqwana waseColombia, le ndaba emfushane iqhuma kulokho okuyindaba engiyithandayo yombhali waseColombia, Umkhondo wakho wegazi eqhweni, Isiphetho sayo esibhubhisayo sichaza kabusha ukujika okudingeka kakhulu kuhlobo olufana nendaba emfushane.
Phila ukutshela ...
Ngemuva kokushona kukaGabo, umhlaba waphendukela kulo msebenzi ngentshiseko enkulu, umlando womlobi wehlukaniswe waba izingxenye ezintathu futhi okusize ukuqonda indawo yakhe yonke yokubhala kangcono. Kuwo wonke amakhasi alo, uGabriel García Márquez ukhuluma ngezindaba azitshelwa ngugogo wakhe, mayelana nokusondela kwakhe ezenzakalweni ezinkulu zikahulumeni wase-US eLatin America noma ngesicelo sokushada nomkakhe, uMercedes Barcha, uthando lwempilo yakhe. Incwadi yashicilelwa ngo-2002.
Ngabe, ngokombono wakho, yiziphi izincwadi eziyi-10 ezinhle kakhulu UGabriel García Márquez ?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izincwadi eziyi-10 ezihamba phambili zikaGabriel García Márquez
UVictor Linares. kusho
Yonke imisebenzi kaGabo yokubhala ingafingqwa ngomklomelo kaNobel awunqobile. Kodwa-ke, imisebenzi emibili ihlangabezana nokulindelekile: Iminyaka Eyikhulu Yokuba Nedwa. »Uthando Ngezikhathi ZeCholera»
Phendula uVictor Linares.
Ngiyakuthanda ukwenziwa kwemibhalo kwe-GGM, ngifisa ukuthi kube okwaphakade ukuze ngingayeki ukubhala futhi ngikwazi ukukujabulela ngawo wonke umzuzu ngento entsha
Igama elithi ubuqiniso bomlingo lethulwa ezincwadini zaseLatin America ngu-Arturo Uslar Pietri waseVenezuela. Baningi abazwakalisa imibono yabo ngalesi sitayela, kodwa akunakuphikwa ukuthi u-Uslar Pietri UNGUBABA wale avant-garde ebhalayo nokuthi unikeza ukuphila kwegama elithi ubuqiniso bomlingo ngomsebenzi wakhe othi Las Lanzas Coloradas owanyatheliswa ngo-1930 ebhalwe ngesiVenezuela. inkathi yamakholoni.. Ngenhlonipho efanele uGabriel G. Marquez kanye namanoveli akhe amakhulu. Kodwa akuwona umlando oqondile ukubiza uMarquez igama elithi uyise wamaqiniso omlingo
2017. Ibhalansi yami emnyama yamaYankees, amaViking, amaNtaliyane, amaGaul kanye nezizwe